Ski Goggles Soo ogow goorta iyo sababta ay tahay inaad u isticmaasho! - ULLER
MIYAAN XIDHAA IGULYAHAYGA SHIRKA MARKASTA?
Haddii aad isweydiineyso su’aashan jawaabteeda waa HAA! Shaki la'aan, barafku wuxuu noqday isku macno xamaasad, adrenalin iyo madadaalo.
El ski Waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah cayaaraha barafka ugu adag uguna xiisaha badan, maxaa yeelay waxay leedahay noocyo aad u fara badan oo ah qaabab, boodbooyin, pirouettes iyo tabaha qabow, oo ka taga in ka badan hal hadal la'aan. Laakiin sida ciyaaraha isboortiga oo dhan, waxaad had iyo jeer u baahan tahay inaad sidato dhammaan qalabka lagama maarmaanka ah ... Miyaad hore u ogtahay sababta aad marwalba u wanaagsan tahay muraayadaha barafka ilaalinaysa marka aad jimicsigaan sameyneyso?
Keen qalabka buuxa ee isboortiga ski hab kasta oo ka mid ah qaababkeeda waa lagama maarmaan si loo gaaro ujeeddooyinkeenna, oo ay ka mid yihiin muraayadaha barafka. Oo waa iftiinka meelaha barafku aad u sarreeyaa, gaar ahaan xilliga qaboobaha, maxaa yeelay booska qorraxda ee cirka ayaa ka hooseeya, falaadhaha qorraxda ku dhacaana waxay leeyihiin aragti dabacsan, oo aakhirka aad waxyeello ugu leh caafimaadka indhahayaga . Intaas waxaa sii dheer, markaan ficil ahaan ku jirno, inaan nafteena ka ilaalino canaasiirta iyo dabeylaha barafka marka barafka la sameynayo waa lagama maarmaan si loo xaqiijiyo aragti wanaagsan marka la socdo barafka
WAA MAXAY DOORASHOOYINKA Ski?
Tixgeli in aad muraayadaha skiWaa inay shaki ku jirin inay u hoggaansamaan heerarka ISO si ay si habboon kaaga ilaaliyaan shucaaca qoraxda. Sidoo kale waa in ay ansaxiyaan CE oo ay raacaan heerarka amniga Yurub. Sidoo kale, waxaa lagama maarmaan ah inay si wanaagsan ugu habboon yihiin wejigaaga oo ay ku jiraan aagagga dhinacyada. Xusuusnow taas muraayadaha ski Kaliya maahan inay indhahaaga ka ilaaliyaan shucaaca qorraxda, waxay sidoo kale kaa caawin doonaan waxqabadka markaad barafka wado, maxaa yeelay waxay hagaajin doonaan firfircoonidaada aragga.
Maskaxda ku hay tan xigta ee aad doorato taada gafas barafka, runta ayaa ah in dhammaantood aysan isku qiimo noqon doonin, iyo wax ka yar haddii aad ka iibsato dukaamada aan la fasaxin ama suuqyada waddooyinka. Waxba intaas maahan! Talada marwalba waa inaad iibsato muraayadaha barafka dukaamada jirka ama dukaamada internetka oo ku siiya ikhtiyaarro iyo moodello leh heerarka tayada ugu fiican, iyo agabka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah iyo kiristaalo.
Haysashada aragti aad u fiican marka lagu ciyaaro isboortiga barafka waxay hubinaysaa dhaqdhaqaaq wanaagsan iyo muuqaal muuqaal ah. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in aan dooranno kan muraayadaha barafka sax kuwa ku habboon baahiyahaaga.
Waa inaad markasta doorataa muraayadaha barafka leh astaamo farsamo sare oo xaqiijinaya waxqabad wanaagsan, dabacsanaan iyo dhaqdhaqaaq marka lagu ordayo xaaladaha ugu daran. Waxaa ugufiican in maalgashi lagu sameeyo tayada markay timaado muraayadaha ski, oo dooro alaabada heerka ugu sarreeya. Xusuusnow in tani aysan macnaheedu ahayn inaad iibsato maaskarada ugu qaalisan, laakiin kuwa ku habboon baahiyahaaga.
WAA MAXAY KATARROOYOOYINKA LYNOOYINYADA YARYAR EE SKI?
Waxaa hadda jira qaybo kala duwan oo miiraha ah muraayadaha indhaha muraayadaha ski, oo u dhexeeya CAT0 illaa CAT4. Tirooyinka ku jira qayb kasta waxay muujinayaan sida muraayadaha indhaha u mugdi yihiin iyo xaddiga nuugista nalka ee ay bixiyaan. Maskaxda ku hay in tani ay ka duwan tahay nuugista shucaaca, oo ilaalintiisu ka imanayso ilaalinta UV400.
CAT0 waa midka ugu nuugista ugu yar (kuwani waa ku dhowaad hufan), iyo CAT4 waa midka ugu nuugista badan (waxaad arki doontaa inay runtii mugdi yihiin). Waxa caadiga ah ayaa ah haddii aadan qabin xaalad indho gaar ah, kuwa aad u badan ee aad isticmaali doontid waa qeybta 1 iyo qeybta 3. lagu dhaqmo ski ama sabuurad.
Qeybta 0: Waxay yihiin ku dhowaad crystals hufan iyo miirayaasha gudbinta iftiinka laga bilaabo 80% ilaa 100%. Waxay noqon karaan mid aan midab lahayn ama midab aad u jilicsan leh. Iyaga ayaa loo muujiyey ku celcelin ski habeenkii ama goor hore intaan qorraxdu soo bixin. Sidoo kale maalmaha daruuraha leh ama suurtagalnimada roobdoonnada.
Qeybta 1: Waxay miiraheeda gudbinta iftiinka ka soo baxdaa 43% ilaa 80%. Waxay yihiin muraayadaha indhaha oo midab jilicsan leh, ku habboon in la isticmaalo marka laydhka la dhimo iyo in laga fogaado raaxo la'aanta iftiinka badan ee bannaanka ee ku dhowaad xaalad kasta.
Qeybta 2: Waxay yihiin dhexdhexaad dhexdhexaad ah. Miiraheeda gudbinta iftiinka ayaa ka soocaya 18% ilaa 43%. Waxaa loo muujiyaa maalmo celcelis iftiin leh.
Qeybta 3: Miiraheeda gudbinta iftiinka ee laga soo qaado 8% ilaa 18%. Waxay leeyihiin midab madow, oo ku filan inay ku raaxaystaan ​​qorraxda, gaar ahaan xilliyada ugu sarreysa. Waxay bixiyaan heer heer sare ah oo mugdi ah oo loogu talagalay barashada isboortiga bannaan, halkaasoo iftiinka iftiinka u beddelo mid dhexdhexaad ah oo culus.
Qeybta 4: Miiraheeda gudbinta iftiinka wuxuu ka soocayaa 3% ilaa 8%. Iyagu waa kuwa ugu mugdi badan dhammaan qeybaha oo dhan iyo miirahooda gudbinta iftiinka laga bilaabo 3% illaa 8% kaliya. Waxaa loo adeegsadaa duruufaha halka dhalaalku yahay in muraayada CAT3 aysan ku filneyn skier-ka.
TALOOYIN KU SAABSAN XULASHADA GOGGLES-KA SII FIIQADA
Ilaalinta indhaha waa lagama maarmaan u ah baraf kasta. Xusuusnow in adiga gafas barafka Waa inay had iyo jeer haystaan ​​difaac 99% ama 100% ah si ay kaaga difaacaan shucaaca.
Hubso inay haystaan Ilaalinta UV-400,maxaa yeelay miiraheeda ayaa kaa difaaci doona falaaraha UVA iyo UVB. Markaa adiga muraayadaha barafka waxay si sax ah u xannibi doonaan falaadhaha qorraxda, iyadoo dhererkiisu ka yar yahay 400 nanometer.
Iibsigamuraayadaha ski leh muraayadaha indhaha ee isweydaarsan kara. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad isticmaasho muraayadaha indhaha oo hagaagsan marka loo eego xaaladaha cimilada iyo iftiinka ee aad ku sugan tahay. Sidee? Waad dooran kartaa oo aad beddeli kartaa qaybta muraayadaha ee maqaarkaaga maadaama ay kugu habboon tahay isla markiiba.
Ka dooro muraayadaha indhaha ski leh "Antifog" ama "nidaamka Antifog”. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad iska ilaaliso inaad ku mashquusho ficil ahaan.
Ka dooro muraayadaha indhaha ski leh hawo gudaha ah. Kaliya maaskaro leh tiknoolajiyadda ka hortagga-uumiga ayaa u oggolaan doonta dib-u-habeynta hawo horumarineed waxayna damaanad-qaadaysaa muuqaal wanaagsan
Iibsiga muraayadaha ski ku habboon wejigaaga iyo wejigaaga si sax ah. Waa inay lahaadaan suumanka ka-hortagga warqadda si ay si fiican ugu hagaajiyaan madaxaaga iyo koofiyadda.
Raadi muraayadaha indhaha barafka iftiin. Waxyaabaha la heli karo waa polyurethane thermoplastic, oo bixiya tayada ugu sareysa iyo iftiinka.
WAX BADAN KA BARO SIII iyo qaababkeeda ugu caansan!
Haddii aad bilaabayso barafka, waxaa laga yaabaa inaad xoogaa cabsi badan tahay, iyo inaad weli u baranayso inaad ku socoto socod baraf ah barafka ama aad gacanta ku qaadatid dhammaan qalabka. Waxaan sidoo kale hubaa in hadda aad ixtiraam iyo taxaddar badan aad u leedahay inaad xawaaraha soo qaaddo. Ha welwelin, tababarku wuxuu ka dhigayaa mid hagaagsan! Waxay ku saabsan tahay yeelasho badan oo naf hurnimo ah, xaalado aad u fiican iyo waxyaabo badan, in badan oo ka mid ah ruuxa tacaburka. Waxay noqon doontaa oo kaliya waqti ka hor inta aysan si dabiici ah u imaanin inaad skis-kaaga gasho, qaadato muraayadaha barafka, oo adigu buuxiyo adrenaline markaad barafka wadato.
Shaki kuma jiro skiWaa mid ka mid ah cayaaraha ugu adag uguna dhameystiran dhamaan, sababtaas darteed waxaa jira siyaabo badan oo lagu dhaqmo oo loogu raaxeysto. In kasta oo ay jiraan qaybo badan iyo noocyo kala duwan oo ah ski in gobol ka gobol isu beddelo, waa la oran karaa taas hababka barafka Kuwa ugu caansan waa: barafka alpine, skiing-cross-dalka, skiing-ka dalka, barafka freeride, skiing speed iyo baraf xor ah. Sii wad akhriska oo waxbadan ka baro iyaga!
Skiing Alpine wuxuu ku leeyahay magaceeda Alps, gobolka ay ka bilaabatay in lagu dhaqmo bilowgii. Waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan uguna caansan ee isboortiga, sababtaas awgeedna waxaa si fudud loogu yaqaannaa "skiing". Waxay ku saleysan tahay soo degayaasha leh barafka barafka iyadoo la raacayo waddo ay ku calaamadeysan yihiin shumacyo buluug iyo casaan ah (albaabbo), oo ku aaddan buuraha dhaadheer ee ugu gaaban waqtiga ugu macquulsan.
Hababka Barafka Barafka Alpine
Diido: tartan seddex maalmood ah, kii ugu dambeeyay wuxuu ahaa tijaabo xawaare jaban.
Slalom ama Slalom: waddo gaaban oo leh irdo badan oo loo qaybiyay jidka (inta u dhexeysa 55 iyo 75) oo masaafo dhan 75cm iyo 15m u dhaxeysa. Wareegyada wadadaani waa cidhiidhi waxayna u muuqdaan kuwo aad u dhib badan; khabiirada jecel.
Giit Slalom: Waxaa jira 2 farac ah waddo kasta; waxay u baahan tahay mootada inuu khibrad badan u leeyahay leexashada xawaare sare. Wadarta ugu yar ee labada jeer ee taariikhda ayaa ku dhawaaqeysa guuleystaha. Habkaani wuxuu yareynayaa masaafada u dhexeysa albaabbadaada ugu yaraan 5m. Habkaani wuxuu yareeyaa tirada albaabada marka loo barbar dhigo Slalom caadiga ah.
Super Giant Slalom (Super G): Qaabkani wuxuu xawaare ku dhejiyaa xawaare sax ah iyo kacsanaan, oo hal jiil ayaa la fuliyaa. Cidii maamusha inay ku qabato waqtiga ugu yar, waa guuleyste.
Is barbar dhig: Waxay ka kooban tahay laba israac oo isku mar ah waddo gaaban. Barbaraha is barbar socda waa mid aad u xiiso badan maxaa yeelay guuleystaha ayaa ah kan ugu horreeya ee ka gudba xariiqda dhamaadka.
Isku dhafan: Waxay leedahay laba qaybood, mid slalom iyo qayb hoos u dhac ah. Waxay u baahan tahay saxnaan iyo farsamooyin xawaare ka badan inta kale. Xaaladdan oo kale, tartame dhaliya wadarta ugu yar labadiisa jeer ee ugu wanaagsan ayaa noqda guuleystaha.
El barafka alpine dhab ahaantii waa habka barafka lagu barto Waana hubaal inay tahay sababta aad kubilaabtay ama aad ugu bilaabi doonto isboortigan. Maskaxda ku hay in ay tahay qaab ay tahay inaadan sameyn haddii aadan haysan qalab sax ah oo wanaagsan muraayadaha barafka.
Waxaa sidoo kale loo yaqaan barafka Nordic, skiing-cross-dalka ama ciyaaraha barafka Waxay ku lug leedahay u safridda masaafo dheer xawaare sare waqtiga ugu gaaban ee suuragalka ah, xagga sii-qaadista, dhul fidsan ama laamo dhaadheer oo dhexdhexaad ah. Kuwani waa qaababka barafka ee Waqooyiga Yurub:
Ski-ga caadiga ah ee Nordic Ski
Barafka barafka ee Nordic
SARIIRKA ISKU DUUBTA
Baaskiil-wadameedka iskudhafka wuxuu isku daraa barafka alpine iyo buur fuulista, laguma sameeyo meelaha calaamadeysan ama diyaarsan. Xaalad jireed oo aad u fiican ayaa lagama maarmaan u ah ku-dhaqankeeda, labadaba kor u kaca iyo ka soo degga buurta. Qaabkan ah skifuulitaanka iyo soo dhaadhaca labadaba waxaa loo qaadayaa safar ahaan.
Freeride waa nooc ka mid ah ski cajiib ah in la sameeyo off-piste, oo loogu talagalay gaar ahaan loogu talagalay fuula leh ruux xor ah. Ma raacayso waddo la qeexay, sidaa darteed baaruhu wuxuu xor u yahay inuu doorto halka uu u guurayo. Kala soocidani waxay si gaar ah uga dhigeysaa mid xiiso leh maxaa yeelay waxaan qaadaneynaa koorsadeenna, annaga oo u mahadnaqeyna muuqaalka qaab ka duwan oo u gaar ah. Waxaa looga dhaqmaa buuraha bikradaha ah halkaas oo ay ku yaalaan baraf baraf ah, dhaadhacyo dhaadheer iyo caqabadaha dabiiciga ah, markaa waxay ku lug leedahay khataraha qaarkood iyo adrenalin badan oo falka ku jira. Freeride waa qaab loo qaabeeyey mootooyinka khibrad badan u leh ciyaaraha.
Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah qaababka ugu xiisaha badan ee barafSkiersku waxay qabtaan jaranjarooyin badan, boodbooyin, iyo pirouettes markay ku dhaqmayaan qaabkan. Waxaa markii hore loogu talagalay inay tahay qaab madadaalo ah, laakiin hadda waxay noqotay isboorti baraf la aqoonsan yahay. Oo ay kujiraan boodbooyin sare iyo carqalado (godad iyo buuro) waxqabadka jaranjarooyinka. Hababka xorriyadda ama freeski waa:
Xawaare / KILOMETER OO LAGU BILAABAY SKI
Waxay ka kooban tahay hoos u dhaadhac si loo gaaro xawaaraha ugu sarreeya ee suuragalka ah ee 1km raadadka si gaar ah loogu talagalay isboortiga. Waxyaabaha caadiga ah ayaa ah in xawaareyaasha xawaare dheereeya ay ka badan yihiin 200km / saacaddii badanaana ay isku qalabeeyaan suud ka sameysan polyurethane ama latex, oo ay xirtaan koofiyadaha aerodynamic, foorarka foorarsan ama u janjeera ugu yaraan 1m, iyo barafka ugu sarreeya 2.4m dheer 10cm ballaaran. El ski xawaare waa nooc isboorti oo ah waxay caan ku noqotay 1930, tartan lagu qabtay magaalada Saint-Moritz (Switzerland), inkasta oo waqtigan xaadirka ah aan loo tixgelinayn inay tahay anshaxa noocyada ciyaaraha Olombikada.
Hadda waxaan ka ogaan wax yar oo ku saabsan hababka barafka y maxay yihiin muraayadaha indhaha barafka inaad ka iibsan karto ciyaartan, waxaad ku sii dhowaanaysaa inaad u baxdo oo aad ku raaxaysato ficilka barafka sida dhabta ah ee aad ugu qalanto. Xusuusnow in cayaaraha xad-dhaafka ahi u baahan yihiin diyaargarow badan oo jireed iyo maskaxeed, iyo sidoo kale kooxaha isboorti ee ugu fiican.
Ku tababar badan oo si wanaagsan ugu diyaar garow hal-abuurka wax wanaagsan muraayadaha barafka mid ka mid ah qaababkeeda!